Sidin'ny Air Madagascar Misy ny fandaminana vaovao
Manoloana ny trangana aretina mbola misy eto amin’ny firenena hatreto dia maro ny fandaminana napetraka eo amin’ireo sidina ao amin’ny Air Madagascar.
Anisan’izany ny sidina eto Madagasikara mandeha sy miverina any Frantsa, izay nalavaina hatramin’ny 15 jona ny fampiatoana raha 18 mey izany tany am-boalohany. Eo ihany koa ny sidina mankany sy avy any Kaomoro izay notapahina hatramin’ny 20 mey. Mahakasika ny any Maorisy kosa dia nanambara ny eo anivon’ny Air Madagascar fa ho tapaka hatramin’ny 1 jona 2020 ny fitaterana ana habakabaka. Ny mankany Sina moa dia mitoetra hatrany ny fampiatoana fivezivezena amin’ny sidina hatramin’ny 30 Jona ho avy izao. Tsy voakasik’ireo fepetra ireo kosa ny sidina mitatitra ireo teratany mikasa hody an-tanindrazana araka ny fangatahan’ny fitondram-panjakany (rapatriement). Mety hiova ihany koa ireo fanapahan-kevitra ireo arakaraka ny zava-misy sy ny tranga eto amin’ny firenena.